၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ အနက် ဆန်ခါတင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများက?? - Yangon Media Group
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ အနက် ဆန်ခါတင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများက??
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအနက် ဆန်ခါတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို မရွေးချယ်ရသေးကြောင်းသိရသည်။ လတ်တလောတွင် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်တွင် အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ဇာတ်ကားများအနက် နောက်ဆုံးအဆင့် ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၁၁ ကားစာရင်းထွက် ပေးနေခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း သိရသည်။
”အခုထိ အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်နေတုန်းပါ။ အကဲဖြတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်း ထပ်ကြည့်ဖို့လိုသေးတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကြည့်နေတာ ကြောင့် အကဲဖြတ်စိစစ်မှုက မပြီးသေးပါဘူး။ ပြီးတော့ အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ဇာတ်ကားတွေ ထဲကနေပြီးတော့ နောက်ဆုံးအဆင့် ဆန်ခါ တင်ကိုလည်း မရွေးချယ်ရသေးပါဘူး။ ရွေးချယ်ပြီးရင် တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်မယ်၊ မပြန်ဘူးဆိုတာကလည်း အခုချိန်မှာ ဘာမှမပြောနိုင်သေးပါဘူး”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးအေးကြူလေးက ပြောသည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအတွက် အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို အကယ်ဒမီအကဲ ဖြတ်အဖွဲ့မှ အကဲဖြတ်စိစစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဆန် ခါတင် ဇာတ်ကားစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေ ညာရန်မှာလည်း မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၅၃ ကားရှိပြီး ယင်းရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများတွင် ‘တီတီနဲ့ဒိုးနတ်’၊ ‘ချန်ပီယံလေး’၊ ‘ဘယ်ရည်းစားကို အချစ်ဆုံးလဲ’၊ ‘ဟန်းနီးမွန်း’၊ ‘ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်’၊ ‘သားဘီးလူး’၊ ‘ငါ့ အကယ်ဒမီ’၊ ‘မာယာစတိုင်’၊ ‘ကွမ်းလုံရက် ၄ဝ’၊ ‘ပထမထပ်ဟန်းနီးမွန်း’၊’ ခေါက်ထီးလေး မလုံ့တလုံ’၊ ‘အရွယ်သုံးပါးချစ်တတ်သည်’၊ ‘လူများကိုခြောက်လှန့်ရန် တစ္ဆေတစ်ကောင်အလိုရှိသည်’၊ ‘ချိုမြိန် သောလက်စားချေခြင်း’၊ ‘အမှောင်မှာ ရွာချတဲ့ မိုးတိမ်(ကျွန်)’၊ ‘သူငယ်’၊ ‘ည’၊ ‘ဘုန်းကညာနှစ်ပါး’၊ ‘ပွဲခံမယ်’ အစရှိသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကို မတ် ၂၃ ရက်တွင် ရန်ကုန် မြို့ရှိ MEP ၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားကို လိုက်ရိုက်ပေးတာမျိုးတွေကတော့ မြန်မာမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး ကမ္ဘာမှာလ??